मुगुबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर शाही यतिबेला चर्चामा छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै उनले हुलाक मार्फत राजीनामा पत्र पठाएको बताएका छन् । शपथ गरेको एक महिना नपुग्दै राजीनामा गरेका सांसद शाहीसँग लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर ६ का प्रतिनिधि शेरबहादुर थापाले कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :
तपाईले संसद सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिनुभयो भन्ने कुरा साँचो हो ?
हो, मैले हुलाकमार्फत एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीलाई राजनीनामा पठाएको साँचो हो । मुख्य कुरा पार्टी चलाउने विधि के हो भनेर मैले राजीनामा दिएको छु । धुम्बाराहीमा पठाएको उक्त राजीनामा पत्रमा प्रदेश सभामुखलाई पनि सम्बोधन गरेको छु ।
मन्त्री पद नपाँएको झोंकमा राजीनामा दिनुभयो हैन ?
म पदको लागि मरिहत्ते गर्ने, लड्ने व्यक्ति होईन । म हिजो पनि पदको लागि लडेको थिएन । म जनताको र देशको रुपान्तरणका लागि लड्दै आएको व्यक्ति हो । मलाई मन्त्री पद नदिनु भन्दा पनि पार्टी विधि बमोजिम नचलेका कारण मैले देश भरिका इमान्दार कार्यकर्ताको भावनालाई समेटेर यो निर्णय गरेको हुँ ।
खासमा यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कारण के थियो ?
नेकपा एमाले पार्टीमा विधि रहेन । अनुभवी कार्यकर्ता, सिनियर कार्यकर्ता, जुनिएर कार्यकर्ताको केही पनि हिसाब-किताब भएन । न त मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी नै बनाए । पार्टीमा कोही पनि सिनियर, जुनियर नहुने, अनि कुनै दुलाबाट छिराएर मन्त्री बनाउने पद्धति शुरु भयो । यसरी दुलाबाट अरुलाई छिराएर, मेहनत गरेका, पार्टीमा लामो समयसम्म संघर्ष गरेकालाई पाखा लगाएर पार्टी त बन्दैन होला नि ? त्यसैले मलाई टिकट दिने पनि केन्द्र पार्टी भएकाले मैले केन्द्रलाई नै राजीनामा पठाएको हुँ ।
आवेशमा आएर निर्णय गर्नुभयो भन्ने टिप्पणी छ, तपाईको राजीनामा पार्टीले स्वीकृत गर्ला र ?
मलाई के लाग्छ भने कि त पार्टीले विधि अनुरुप चल्नुपर्यो नभए मेरो गल्ति देखाएर मेरो राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्यो । मैले पार्टीमा यस्तो किन भइरहेछ भनेर नै त्यसको विरोध स्वरुप राजीनामा दिएको हो । अब मलाई मन्त्री पद दिएपनि म लिन्न । २०५६ मा म सांसद भएर जनताको काम गरें । मलाई मेरो जिल्लाका जनताले कति माया गर्छन कसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ।
पार्टी गुटबन्दीमा चल्यो भन्ने गुनासो हो ?
होईन मैले एउटै गुटलाई पनि भन्न खोजेको छैन । अहिले पनि इमान्दार कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाईरहेका छैनन । इमान्दार कार्यकर्ताले हिजोदेखि आजसम्म जनतासँग घुलमिल भएर काम गरेका छन् । जिल्लामा पार्टीको नेतृत्व पनि तीनैले सम्हालेका हुन्छन् । तर जब अवसर आँउछ, नयाँले पाँउछन । पार्टी बनाउने एक, लाभ लिने अर्को भनेपछि यो विधिसम्मत नै भएन ।
अर्को कुरा महाधिबेशनका बेला कोही कसैतर्फ ढल्किएला तर त्यो आधारमा मात्रै गुटमा कार्यकर्तालाई राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । केही हाम्रा नेताहरु छन् जो सधैं गुट चलाएर बसिरहेका छन्। उदाहरणका लागि हाम्रा नेता प्रकाश ज्वालालाई नै हेरौं । उहाँलाई सांसदका लागि जिल्ला कमिटी सल्यानले सिफारिस नै गरेको होइन ।
चरम गुटबन्दीका कारण उहाँलाई झ्यालबाट छिराएर सांसद पदको टिकट दिइएको हो । अहिले आएर त्यसैगरी मन्त्री बनाएर पठाईएको छ । अनि त्यो पनि माथिल्लो तहका नेताहरुको ठाडो आदेशमा, ईशारामा । अब त्यसरी मन्त्री पनि, सांसद पनि चयन गरिने हो भने इमान्दार कार्यकर्ताले कहिले अवसर पाउने ?
आफू मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा अन्य मन्त्रीलाई आरोप लगाउँदै हिड्नु भएको आरोप छ नि ?
मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन । त्यस्तै क्रियाकलाप भएको छ । अन्य पार्टीबाट एमालेमा ल्याएकाहरुलाई मन्त्री बनाइएको छ, त्यो किन भयो ? नन्दसिंह बुढालाई मैले नै राप्रपाबाट एमालेमा प्रवेश गराएको हुँ ।
कोही ठेकेदारलाई मन्त्री बनाइएको छ, कोही एनजिओकर्मीलाई मन्त्री बनाइएको छ । जसले देशका लागि, परिवर्तनका लागि लडें ती गुमनाम हुने र आयातितले अवसर पाउने हो भने हामीले किन त्यहाँ बसिरहनुपर्ने ? मेरो भनाई नै यही हो ।
अब तपाईलाई कुन पद दिए राजीनामा फिर्ता लिनुहुन्छ ?
मलाई केही पनि चाहिँदैन । मेरो माग भनेको पार्टी विधि विधान अनुरुप चल्नुपर्यो । विभिन्न चलखेल गरी इमान्दार कार्यकर्ताको मनोबल घटाउन भएन । मैले भनिहाले यदि म संसदमा कुनैपनि पद नपाए पनि काम गर्न सक्छु । म नयाँ साधारण सदस्यता लिएर पनि पार्टीमा बस्न सक्छु ।
तर, अहिले ठेका पट्टा गर्नेहरु, अन्य पार्टीबाट आएकाहरु, एनजीओ चलाएर बसेकाहरु र चरम गुटको खेति गर्नेहरुलाई थप हौसला दिदै पुरस्कृत गर्ने जो परम्पराको पार्टीमा विकास भएको छ यस्ले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुर्याउने पक्का छ ।
यदि त्यसरी नै पार्टी चलाउने हो भने देशैभरका इमान्दार कार्यकर्ताहरुको मन कति दुखेको होला ? नेतृत्वले यसबारेमा सोच्ने कि नसोच्ने ? म अहिले केन्द्रीय सल्लाहकारको रुपमा काम गरिरहेको छु । हाम्रा सल्लाह सुझाव पार्टीले मान्ने कि नमान्ने कुरा यो हो । यक्ष प्रश्न यो हो ।
आफू मन्त्री बन्न पाइन भनेर प्रदेश सरकार समावेशी भएन भन्न मिल्छ ?
हो, प्रदेशमा उपयुक्त ढंगले महिलालाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराइएन । दलित समुदायबाट कसैको पनि प्रतिनिधित्व नगराउनु भनेको आपत्तिजनक हो । बहस समावेशीको गर्ने तर व्यवहार पुरानै ढर्राको हुने यो त भएन नी ।
अब के गरेको खण्डमा यहाँले राजीनामा फिर्ता लिनुहुन्छ ?
म देशभरिकै आम इमान्दार कार्यकर्ताको प्रतिनिधित्वको रुपमा राजीनामा दिने व्यक्ति हुँ । मलाई हजारौं साथीहरुले कडा कदम चालेको भन्दै धन्यवाद समेत दिएका छन् । मेरो चाहना भनेको वर्षौंदेखि पार्टीमा योगदान दिएका, देश र जनताकालागि काम गरेका स्वच्छ छवि भएका नेताहरुले पार्टीमा अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो ।
कोही ठुला नेताको नजिक भएर मात्रै अवसर पाउने, कोही गुटको खेति गरेर अवसर पाउने तर भुगोलमा दुःख गरेका नेता कार्यकर्ताहरुले अवसरै नपाउने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ ।